စပျစ်သီးအစေ့ထုတ်ယူမှုသည်ဥရောပအရည်အသွေးမြင့်စပျစ်သီးမှထုတ်ယူသောအညိုရောင်အနီရောင်အမှုန့်ဖြစ်ပြီးရေထုထုံးခြင်း၊ ဗဓေလသစ်ဆန်းစစ်ခြင်း၊ ၎င်းကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ အလှကုန်နှင့်အခြားနယ်ပယ်များတွင်အဓိကအသုံးပြုသည်။
လုပ်ဆောင်ချက် - စပျစ်သီးအစေ့ထုတ်ယူမှုသည်လူ့ခန္ဓာကိုယ်မှပိုလျှံသောအစွန်းရောက်အစွန်းရောက်များကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီးအိုမင်းခြင်းကိုဆန့်ကျင်ခြင်းနှင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုတိုးတက်စေသည်။
USP စံနှုန်းနှင့် CCGB အရည်အသွေးတို့အကြားနှိုင်းယှဉ်မှု
◆ USP စံနမူနာ
◆ CCGB စပျစ်သီးအစေ့ထုတ်ယူမှု
epicatechin5- (-)
နိဂုံး: USP စံနမူနာပုံနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များ၏ထူးခြားသောအစိတ်အပိုင်းများသည် USP စံနမူနာများနှင့်ကိုက်ညီပြီး oligomeric proanthocyanidins ပါဝင်မှုသည်စံထက်ပိုမိုမြင့်မားသည်။
CC CCGB မှသဘာဝစပျစ်သီးအစေ့
◆စပျစ်သီးအစေ့မှ 1% မြေပဲအရေပြား Extract နှင့်ရောနှောထားသည်
◆စပျစ်သီးအစေ့ Extract နှင့် ၁% Pine Bark Extract နှင့်ရောစပ်သည်
နိဂုံး:NATURAL GRAPE SEED EXTRACT တွင်ထူးခြားသောထူးခြားချက် ၇ ခုရှိပြီး OPC ၏အထွတ်အထိပ်သည်အချိုးအစားမျှတသည်။ ၎င်းသည်မြေပဲအရေပြားထုတ်ယူမှုသို့မဟုတ်ထင်းရှူးပင်အခေါက်ထုတ်ယူမှုနှင့်ရောနှောပါကပုံမှာလုံးဝကွဲပြားခြားနားသည်။ CCGB သည်သဘာဝစပျစ်သီးအစေ့ထုတ်ယူမှုကိုသာထောက်ပံ့ပေးသည်။ ၎င်းသည်နမူနာ ၁၀၀% သဘာဝရှိမရှိခွဲခြားနိုင်သည်။
1. အရည်အသွေးကောင်းမွန်သောပြင်သစ်စပျစ်သီးအစေ့များကိုကုန်ကြမ်းအဖြစ်ရွေးချယ်ပါသည်။ သို့မှသာထုတ်ကုန်သည်အရည်အသွေးကောင်းမွန်ပြီး oligomeric proanthocyanidins ပါဝင်သည်။ အထူးလက္ခဏာနှင့်တိကျသောစမ်းသပ်မှုကိန်းဂဏန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကိုသက်သေပြပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အားအာမခံချက်ပေးသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်စဉ်ဥရောပအရည်အသွေးမြင့်စပျစ်သီးစေ့တန်ချိန် ၅၀၀၀ နီးပါးကို ၀ ယ်ယူသည်။ ထို့ကြောင့်ထုတ်ကုန်သည်အရည်အသွေးကောင်းပြီး oligomeric proanthocyanidins ပါဝင်သည်။ အထူးလက္ခဏာနှင့်တိကျသောစစ်ဆေးမှုကိန်းဂဏန်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အရည်အသွေးကိုစစ်ဆေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များအားအာမခံချက်ပေးသည်။
3. အကြီးစား, စဉ်ဆက်မပြတ်နှင့်အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှု
ကိုယ်ပိုင်တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားသောအဆက်မပြတ်စီးဆင်းသောတန်ပြန်ထုတ်ယူနိုင်သောပစ္စည်းကိရိယာများဖြင့်တစ်နေ့လျှင်ကုန်ကြမ်းတန်ချိန် ၃၀ ကိုကျွေးမွေးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ဖောက်သည်များအားတည်မြဲသောကုန်ပစ္စည်းများထောက်ပံ့ပေးနိုင်သည်။
စပျစ်သီးစေ့ Extract Proanthocyanidins 95
စပျစ်သီးအစေ့ Extract Polyphenol ၈၀%
1kg Alu Bag * 25 / ပုံးထုပ်
ရှေ့သို့ ဂျင်း extrac